Semalt Expert dia mamaritra ny karazana WordPress Sites
Rehefa manatrika ny aterineto ianao dia afaka manampy ny marika aminao hahatsapa tena marina ary hampitombo ny lanjany sy ny lazany eo anoloan'ny mpanjifa mety. Raha olona iray eo amin'ny fananganana asa ianao, dia azonao atao ny manana ny taha ambony avo lenta izay azo atao amin'ny portfolio. Azo antoka ny miteny fa WordPress no vahaolana tsara indrindra sy tsara indrindra amin'ny olana rehetra ao amin'ny aterineto. Raha te hampahafantatra ny aterineto amin'ny aterineto ianao, WordPress dia hiasa ho toy ny fiaraha-miasa amin'ny orinasa ara-tsiantifika ary hanampy amin'ny famolavolan-javatra avy amin'ireo tranonkala tsotra ho an'ny tranonkala matihanina.
Oliver King, manam-pahaizana lehiben'ny Semalt , dia mandinika karazana tranokala 4 izay azonao atao amin'ny WordPress sy fitaovana sasantsasany izay hanampy anao hanangana tranonkala tsara tarehy sy miavaka. 10)
1. tranokala eCommerce
Trano Whisky no tranokala mivarotra Whisky Scottish, ary natsangana tao amin'ny WordPress. Maro ny tranonkala e-commerce sahala amin'ny WordPress. Raha manana orinasa orinasa Amazon ianao ary te hampahafantatra an'izao tontolo izao momba izany, Wordpress dia safidy tsara indrindra ho anao satria hanampy anao hahatratra olona marobe izany. Amazon dia orinasa haingam-pandeha an-tserasera izay tarihin'ny iray hafa noho ny WooCommerce, ary ny endriny dia mifototra amin'ny sehatra Divi WordPress manokana. Ny WooCommerce dia tena plugin amin'ny Automattic, ary misy karazan-tsarimihetsika. Ity plugin ity dia misy ao amin'ny WordPress ary azo alamina ao anatin'ny fotoana fohy. Manana karazana safidy sy karazan-javatra maro izy, izay samy mandray sy maimaim-poana. Zavatra iray hafa azonao andramana dia Easy Digital Downloads sy iThemes Exchange..Manampy anao hampivelatra tsena amin'ny alalan'ny fampiasanao ny kaontinao WordPress. Aza adino ny manapaka azy amin'ny WooCommerce noho ireo karazana sy safidy manjavozavo.
2. Tranonkala fandraharahana
Raha te hanana orinasa na orinasa goavam-be toa an'i Mercedes-Benz ianao, WordPress dia safidy tsara ho anao. Ity orinasa mpanamboatra fiara ity dia nisafidy ny WordPress ary lasa iray amin'ireo marika tsara indrindra eran'izao tontolo izao. Nanasongadina tsara ny fampisehoana azy io izy io ary mampiseho fiara maromaro hanangona mpampiasa maro kokoa. Ny tranonkala dia manasongadina lohahevitra miloko mareva-doko izay mifangaro amin'ny marika sy ny fiara. Marina fa WordPress dia manana karazana plugins, izay azonao ampiasaina hananganana fifandraisana amin'ny form, sary slide, sehatra fitarihana ary hafa.
3. Portale vaovao
Ny vavahadin-tserasera tahaka ny CNN sy ny MTV News dia nifidy WordPress ho an'ny sehatra an-tserasera. Samy manana mpihaino maro manerana izao tontolo izao ireo tranonkala roa ireo ary fantatra noho ny fampisehoana sy ny lohahevitra miavaka. Manana fomba mahatalanjona ny MTV ary mandamina ny lahatsorany manokana. Toy izany koa ny momba ny CNN. Ny foto-kevitra nofidin'izy ireo dia mampiseho ireo toetra fototra amin'ny teti-maoderina maoderina, izay ahitana ny sary sy ny votoaty mifangaro tsara. Amin'ny WordPress, azonao atao ny manangana tranonkala mitovy ary mampiasa ny plugins ho an'ireo mpitsidika mpitsidika, boaty mpanoratra, fizarana media sosialy, ary asa hafa. IssueM no fitaovana tsara indrindra hahazoana ireo zavatra ireo.
4. Fiaraha-monina an-tserasera
Tokony ho efa nandre momba ny Tasty Kitchen ianao. Ity no toerana nidiran'ireo mpihinana sakafo sy mizara ny fomba fisakafoany an-tserasera ary mifanakalo hevitra momba ny fahazaran-dratsiny. Ity tranonkala ity dia miorina eo an-tampon'ny BuddyPress, tranokala Open Word Word plugin novolavola sy navoakan'ny Automattic. Ity plugin ity dia manolotra ny zavatra rehetra tokony hanomboka amin'ny media sosialy. Afaka mamorona vondrom-piarahamonina anaty aterineto ianao amin'ny alalànao ity plugin ity ary manapariaka kokoa ny mpamaky Source .